हवाईजहाजसँग विवाह गर्दै महिला! - Everest Dainik - News from Nepal
हवाईजहाजसँग विवाह गर्दै महिला!
बर्लिनैंः मानिस वा कुनै जीवजन्तु अर्थात् सजीव वस्तुसँग कुनै व्यक्तिको प्रेम हुनु सामान्य कुरा हो, तर निर्जीव वस्तुसँग पनि कसैको प्रेम हुनु विलकुल अचम्मको कुरा हो ।
तर, जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा केही यस्तै घटना भएको छ । ३० वर्षीय एक महिलाको ६ वर्ष पहिलेदेखि बोइङ ७३७–८०० विमानसँग प्रेम भयो र उनी आगामी महिना अर्थात् मार्चमा यो जहाजसँग विवाह गर्दैछिन् । यो अचम्मको विवाह नेदरल्यान्डको राजधानी एम्स्टर्डमा हुनेछ ।
केटीको नाम मिशेल कोबके हो । मिडिया रिपोर्टका अनुसार मिशेलले पहिलो पटक यो बोइङ विमानलाई २०१४ को मार्चमा टेगल एयरपोर्टमा देखेकी थिइन र पहिलो हेराइमै उनलाई यो विमानसँग प्रेम भएको थियो । उनलाई हवाईजहाजको पंखा, विङलेट र थ्रस्टर्स धेरै राम्रो लाग्थ्यो ।
मिशेल हवाईजहाजलाई मायाले सात्स भन्ने गरेकी छिन् । जर्मन भाषामा सात्सको अर्थ प्रिय हुन्छ । उनले सात्सलाई आफ्नो पहिलो प्रेम भएको बताएकी छिन् । यद्यपि उनी २०११ मा एक व्यक्तिसँगको रिलेसनसिपमा रहँदै आएकी थिइन्, तर उक्त सम्बन्ध लामो समयसम्म टिक्न सकेन ।
मिशेल पेसाले एक सेल्स वुमन हुन् । उनी धेरैजसो आफ्नो प्रेम अर्थात् विमान हेर्नका लागि एयरपोर्ट जाने गरेकी छिन् । उनले विमानको एक मोडल पनि किनेकी छिन् र उनी सधैं यसलाई आफूसँगै राख्ने गर्छिन् । मिशेलको यो अचम्मको प्रेमका बारेमा उनको परिवारलाई पनि थाहा छ र उनीहरूलाई यसबाट कुनै समस्या छैन । एजेन्सी
ट्याग्स: बोइङ विमान, मिशेल कोबके, हवाईजहाजसँग विवाह